I-TOMS: Isifundo Samacala Ekumaketheni Kwenzuzo Enenzuzo | Martech Zone
I-TOMS: Isifundo Samacala Ekumaketheni Kwenzuzo Enenzuzo
NgoLwesihlanu, Agasti 23, 2013 NgoLwesihlanu, Septhemba 5, 2014 Douglas Karr
Esikhathini esedlule ngike ngabhala isikhalazo ngale blog ukuze Misa Ukubulala Imbangela Yezimbangela. Inkinga kwaba ukungqubuzana nemiphumela engahlosiwe abathengi ababenayo lapho amabhizinisi esebenzisa imizamo yawo yokumaketha emabhizinisini enzuzo ngenkathi esebenzisa okungenzi nzuzo noma izinhlangano zosizo ukusabalalisa igama. Abamelene nokukhangiswa kwembangela bakholelwa ukuthi amabhizinisi ayayisebenzisa kabi le nhlangano… futhi kufanele anikeze noma yikuphi ukuxhaswa ngemali ngenxa yobuhle bezinhliziyo zawo. Inkinga yami ngalokho kwesinye isikhathi imali ayitholakali nika… Kepha ivame ukutholakala uma kungukutshalwa kwemali.
Uma ungezwanga TOMS, uzomangala ukuthi yini le inzuzo ibhizinisi selifezile emhlabeni. Kusukela ngo-2006, i-TOMS ibeke Izicathulo ezibhangqa eziyizigidi eziyi-10 ezinyaweni zezingane emazweni angaphezu kwama-60. Futhi kusukela ngo-2011, i-TOMS inayo kubuyise ukubona kwabangaphezu kuka-150,000 ngokuthengwa kweTOMS Eyewear. Ekupheleni konyaka we-2014, izifunda ezingaphezu kwama-35 lapha e-US zizothola ngababili abangaphezu kuka-1,000,000 XNUMX XNUMX izicathulo ezintsha nokubona kuyabuyiselwa ezifundeni ezi-3.
I-TOMS inika izinhlobo ezintathu zezicathulo:
I-Canvas Unisex Slip-Ons - isitayela esihle senhloso yonke (esifana naleso abathengi abasithenga nsuku zonke); izingane zingakhetha emibala ehlukahlukene
Izicathulo zezemidlalo - zenzelwe ukuzivocavoca umzimba; kunezela izinhlelo zethu Zokunikeza Ozakwethu ezibhekise ukukhuluphala kwengane
Amabhuzu Wasebusika - Uboya obugcwele uboya, obungangenwa ngamanzi, obulungele ukuguquguquka; yakhelwe ukumelana nezimo ezibandayo.
Umphakathi weTOMS usize ukuguqula umqondo olula ube yinto enamandla. Amaqembu afana Izinhlelo ze-TOMS Campus Uthola abafundi basekolishi kulo lonke elase-United States ukuthi babandakanyeke emicimbini efundisa abanye ngokuthenga okuthengiswayo nakusomabhizinisi kwezenhlalo. Uhlelo lwethu lokuqeqeshwa luye lwavumela abanye abantu abasha ukuba babe yingxenye ebalulekile yendaba yethu.
Ukuhamba kwabo kwakhiwa izingxenye eziningi, kufaka phakathi Usuku Olunye Ngaphandle Kwezicathulo futhi Usuku Lomhlaba Lokubona izinsuku zethu zaminyaka yonke zokuqwashisa ngezinkinga zomhlaba wonke zobuphofu kanye nokungaboni okungagwemeka kanye nokukhubazeka kokubona. Ithikithi Lokunikeza ikunika ithuba lokuzibandakanya nabo ohambweni lwe-Giving futhi usabalalise izicathulo ze-TOMS Shoes ezinganeni ezisensimini. Futhi uma ufuna ezinye izindlela zokuzibandakanya, Ithimba labo Lomphakathi linemibono eminingi.
Le yingane yeposta yeCause Marketing. Ngokuhlala kunenzuzo, i-TOMS ayitholanga nje ithuba lokusiza, futhi bandise nokusebenza kwabo. Ukumaketha okuyimbangela enenzuzo kuye kwabagcina bezinzile.
Tags: imbangelaimbangela yokumakethaokukodwaukumaketha okuqhutshwa yinjongokwenziwa inhlosoizicathulo ze-toms
Izibalo Zokumaketha ezingama-30 Okungafanele Uzikhumbule